मेयर विद्यासुन्दरको प्रश्न : पुरातत्त्वले जे गरे पनि हुने, हामीले केही गर्नु नहुने ? — Newskoseli
मेयर विद्यासुन्दरको प्रश्न : पुरातत्त्वले जे गरे पनि हुने, हामीले केही गर्नु नहुने ?
रानीपोखरीको बीच भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर भत्काउनुपर्ने भएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्त्व विभागबीच द्वन्द्व कायम रहँदा करिव ४ महिनादेखि मन्दिर पुनर्निर्माणमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।
उक्त विवादका कारण मन्दिर र रानीपोखरी पुनर्निर्माणका ठेकेदारसँग ठेक्का तोडिने अवस्था आइसकेको छ । विभागले रानीपोखरीको ड्रइङ–डिजाइनसहितको नयाँ नक्सा महानगरपालिकालाई बुझाइसकेको छ । विभागले चैत ५ मा विस्तृत विवरणसहितको नक्सा महानगरलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
इन्जिनियरद्वय लक्ष्मणराज वासुकला र पूर्णबहादुर श्रेष्ठले तयार पारेको सो नक्सा कामपालाई हस्तान्तरण गरिसकिएको जानकारी विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले दिए । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्याशुन्दर शाक्यले नक्सा प्राप्त भइसकेको भन्दै विस्तृत छलफल गरेर निर्माण सुरू गर्ने जानकारी दिए । रानीपोखरीको मात्रै नभई मन्दिरको पनि नक्सा तयार हुनुपर्ने उनले बताए । यद्यपि विभागले परम्परागत सामग्री प्रयोग गरेर मात्रै रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।
मल्लकालीन शैलीमा नै बनाउनुपर्ने सो मन्दिर राणकालीन शैलीमा बनाइएकाले भत्काउनुपर्ने दाबी मेयर शाक्यले गरे । विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मन्दिर निर्माण हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । ‘रानीपोखरीको वरिपरि बनाइएको कंक्रिटको पर्खाल र अन्य संरचना समेत हटाउने तयारी भइरहेको अवस्थामा पुरातत्त्व विभागले पेलेर कंक्रिटको पिलरमाथि मन्दिर बनाइरहेको छ’– उनले भने ।
उता सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका आधारमा सो मन्दिर बनाइएको दाबी गर्दै विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने– ‘सर्वोच्चले राणाकालीन शैलीमै मन्दिर बनाई मासिक रूपमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने आदेश दिएपछि सो निर्माण गरिएको हो ।’ मेयर शाक्यले प्रतिप्रश्न गरे– ‘पुरातत्त्वले जे गरे पनि हुने, हामीले केही गर्नु नहुने ? पुरातत्त्वले सो मन्दिर मल्लकालीन शैलीमा नबनाएसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’
केही दिनअघि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, पुरातत्त्व विभाग, कामपा र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीबीच भएको बैठकमा पनि जनचाहना र विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा रानीपोखरीको सम्पूर्ण संरचना मल्लकालीन शैलीमै बनाउने अडान राखेको उनले बताए । सो बैठकमा मन्त्री अधिकारीले तत्काल मन्दिर बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।
मल्लकालीन शैलीमै मन्दिर बनाउन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण रकम कामपाले नै व्यहोर्न सक्ने दाबी मेयर शाक्यले गरे । विवाद गर्नुभन्दा समस्या समाधानको बाटो अपनाउनुपर्ने महानिर्देशक दाहालले बताएको खबर आइतबारको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।